Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
At our site, gaarka ah ee soo booqda waa muhiimada xad dhaaf ah noo. document Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani waxay qeexaysaa noocyada macluumaadka shakhsiga ah la helo oo laga soo ururiyey by our site iyo sida loo isticmaalo.
Sida goobaha kale oo badan Web, our site ka dhigaa isticmaalka files log. Macluumaadka gudaha files log ka mid ah hab maamuuska internet (IP) cinwaanada, nooca browser, Adeegga Internet Provider (ISP), taariikhda / waqtiga stamp, tilmaamayo bogagga bixitaanka /, iyo tirada qasabno si ay u falanqeeyaan isbeddellada, maamulo goobta, dhaqdhaqaaqa track user ee goobta, oo waxaad ururisaa xogta dadka. cinwaanada IP, iyo macluumaadka kale ee sida aan lala macluumaad kasta oo qofka lagu garan karo waa.
Cookies iyo kati Web
our site ma isticmaali cookies in uu kaydiyo macluumaadka ku saabsan martida door bidayso, record macluumaad user-gaar ah oo ku saabsan taas oo pages heli user ama booqo, astaysto page Web content ku saleysan nooca martida browser ama macluumaad kale oo booqdaha soo diro via ay browser.
DoubleClick gamuun cookie
Google, sida xisbiga iibiya saddexaad, isticmaalaa cookies si ay ugu adeegaan xayeysiis on our site.
Google ee isticmaalka buskudka iyo hoto awood u in ay u adeegaan xayeysiis in dadka isticmaala oo ku salaysan ay booqasho si ay noo goobta iyo goobo kale oo ku saabsan internetka.
Users laga yaabaa out of isticmaalka buskudka iyo hoto adigoo booqanaya siyaasadda gaarka ah network ad iyo content ee Google ee URL soo socda – http://www.google.com/privacy_ads.html.
our site ma laha helitaanka ama gacanta, kuwaas oo cookies loo isticmaalo by xayeysiiya dhinac saddexaad.
Waa in aad la tashato siyaasadaha gaarka ah kala oo ka mid ah server ad dhinac saddexaad wixii macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah oo ku saabsan dhaqanka ay sidoo kale u hesho tilmaamo ku saabsan sida loo dooran-out of dhaqanka qaarkood. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah our site ee ma khuseeyo, oo aanan koontarooli karin hawlaha, sida xayeysiiya kale ama bogagga internetka.
Haddii aad doonayso inaad gab cookies, aad sidaas u samayn karaa oo aad fursadaha browser shaqsi. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan maareynta cookie la daalacashada web gaar ah waxaa laga heli karaa website-yada kala browser ee.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn -
Laga yaabaa 2020